Matongerwo eNyika, 31 Chivabvu 2019
Chishanu 31 Chivabvu 2019
VaDabengwa Voradzikwa kuNtabazinduna neMugovera
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muWhite City Stadium muBulawayo zvichionekana nemutumbi wegamba renyika, VaDumiso Dabengwa, avo vachavingwa kuNtabazinduma neMugovera.
ZCTU Inonyorera VaMnangagwa Tsamba Ichikurudzira Nhaurirano dzeTNF
VaMutasa vanoti musangano uyu, weTripartite Negotiating Forum, ndiyo chete nzira inogadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi pamwe neveruzhinji, avo vavanoti vave kutadza kuenda kumabasa kana kutenga zvekudya nekuda kwekuoma kwezvinhu.
VaMangudya Vanoti Vanotengesa Mafuta Vari Kuita Chitsotsi
VaMangudya vati pane humbowo hunoratidza kuti mamiriyoni mashanu emarita ari kubva kumatangi ekuMsasa zuva rega rega, asi mafuta aya haasvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika.
Mutungamiri weNyika, VaEmmerson Mnangagwa, Voyambira Vanoita zveHuwori
Vachitaura pakuparurwa kwe Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe muHarare, mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vavimbisawo kuti mazuva ezvikwata zvevanhu vari kuita huwori asvika kwamvura yacheka makumbo, vakati huwori hahusi kuzopiwa mukana.
VaMagufuli Vanoti Kushanya Kwavo Kunosimbaradza Hukama hweZimbabwe neTanzania
Mutungamiri weTanzania, VaJohn Magufuli, vanoti vashanya muZimbabwe nechinangwa chekusimbaradza hukama hwenyika yavo neZimbabwe.
ZIMRA Yotora Zvinhu Zviri Kupinzwa Zvisina Kubhadharirwa Mutero
Vamwe vevanotenga zvinhu kuSouth Africa vachipinda nazvo munyika vanonzi vari kuchema zvichitevera kutorwa kwezvinhu zvavo izvi pamuganho weBeitbridge nevashandi veZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA.